Saturday, November 17th, 2018 - 15:44:42
Klopp muxuu ka yiri in Europe League ay isku beegan yihiin Manchester United??
0 Friday February 26, 2016 - 18:25:18
(Kubadbile) Maanta waxaa la sameeyay isku aadka Europe League wareegiisa 16ka, waxaana isku beegmay labada kooxood ee Ingiriiska ugu koobabka iyo taariiqda badan Manchester United iyo Liverpool.
Isku aadka wareega 16-ka Kooba Uefa oo lasoo saaray Liverpool iyo Man United oo isku aaday
0 Friday February 26, 2016 - 15:24:09
(Kubadbile)-Waxaa goor dhaw lasoo gebagabeeyay isku aadka wareea 16-ka koobka Uefa Ueropa League waxaana kulanka ugu adag u dhex mari doonaa kooxaha Liverpool iyo Manchester United ee dalka Iniriiska ka socda.
Man United oo u awood sheegatay kooxda FC Midtjylland+Sawirro
0 Friday February 26, 2016 - 01:53:54
(Kubadbdile)-Kooxda Manchester United ayaa 5-1 ku dharbaaxday kooxda FC Midtjylland edalka Denmark oo ay ku marti gelisay garoonka Old Trafid luta labaad ee w areega 32 koobka Uefa Ueropa Leaugue.
Kooxda Liverpool oo usoo baxday wareega 16-ka koobka Uefa+Sawirro
0 Thursday February 25, 2016 - 23:16:50
(Kubadbile)=-kooxda Kubadda cagta Liverpool ayaa usoo gudubtay wareega 16-ka koobka Uefa Ueropa League kadib marki ay 1-0 kaga adkaatay kooxda Augsburg eedalka Jarmalka.
Aqriso kulamada koobka Uefa iyo Saacada la daawan doono Caawa
0 Thursday February 25, 2016 - 07:37:57
(Kubadbile)- Waxaa caawa qaaradda Yurub ka dhacaya kulamda lugta labaad wareega 32 ee koobka Uefa Ueroa League.
Klopp oo indhaha ku haya koobka Europe League
0 Wednesday February 24, 2016 - 20:13:05
(Kubadbile) Tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool Jurgen Klopp ayaa ka dhawaajiyay inay isha ku hayaan kulanka xiisaha badan ee Europe League lugta labaad la dheeli doonaan Augsburg, xilli Finalka League Cup uu ku soo food leeyahay.
David de Gea oo ka maqnaanaya Manchester United kulanka ay ka hortagayaan FC Midtjylland
0 Wednesday February 24, 2016 - 19:58:54
(Kubadbile) Maareeyaha kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa xaqiijiyay in habeen danbe kulanka ay la dheelayaan FC Midtjylland ay cayaari doonaan la'aanta goolhayahooda koowaad David de Gea.
Antonio Valencia iyo Marcos Rojo oo ku soo laabtay tababarka kooxda Man UTD
0 Wednesday February 24, 2016 - 15:11:30
(Kubadbile) Wiilasha Koonfurta Ameerika ka soo jeeda Antonio Valencia iyo Marcos Rojo ayaa ku soo laabtay tababarka kooxda Manchester United ka hor kulanka ay habeen danbe tartanka Yurub la dheeli doonaan naadiga Midtjylland.
Ueropa League wareega 32 oo caawa la cayaarayo ogooow saacadda
0 Visits: 455 | Thursday February 18, 2016 - 09:48:16
(Kubadbile)-Waxaa caawa qaarada Yurub kdhacaya kulamda koobka Uefa Ueropa League 2015-16 wareegisa 32-aad.
Kulamada Caawa ee Champions League iyo Europa League, Saacadaha ay dhacayaan
0 Tuesday February 16, 2016 - 10:22:45
Kulamo xiiso badan oo ka tirsan Champions league iyo Europa League ayaa caawa ka dhacaya Garoomada kala duwan ee Yurub, waxaana jiri doona Kulanka PSG ay soo dhoweyn doonto Chelsea.
Liverpool oo Wajaheysa 9 kulan 29 Maalmood!!, keddib garab dhicii FA Cup ee West Ham "Sawirro"
0 Sunday January 31, 2016 - 11:51:06
Liverpool ayaa ciyaari doonta Bisha February Kulamadii ugu badnaa iyadoo la ogyahay Garab dhicii Xalay ee Kooxda West Ham.
DEG DEG: FIFA Oo Shaqada Ka erisay Xoghayihii Guud Ee FIFA Jerome Valcke
0 Wednesday January 13, 2016 - 13:17:39
( Kubadbile)-Hey'adda kubadda cagta aduunka ee FIFA ayaa si dhaqso ah ugu dhawaaqday inay shaqadii ka erisay xoghayihiid guud ee ururka Jerome Valcke ,kadib dhacdooyin xasaasi ah oo la isla qaatay maanta.
Isku aadka Europa League ee 32-da koox oo lasoo Saaray
0 Monday December 14, 2015 - 15:59:58
Kooxaha England ayaa ku beegmay kooxo aan Sahlaneyn marka laga reebo Man Utd oo ku dhacday koox aan sidaa u xoog badneyn, Midtjylland.
VIDEO: Illeyn Klopp Rigoorada wuu ka baqaa?!!
0 Saturday November 28, 2015 - 16:41:47
Liverpool macallinkooda Jurgen Klopp ayaa soo bandhigay habka rigoore Tuurka kooxda oo markii la ridayay Rigoore ay ku rideen Bordeaux ciyaartii Europa league.
Liverpool: Daniel Sturridge oo diyaar ah kulanka Bordeaux
0 Thursday November 26, 2015 - 11:13:03
Daniel Sturridge ayaa kasoo muuqan doona kulanka kooxdiisa Liverpool ay ciyaareyso, tan iyo markii Jurgen Klopp uu shaqada qabtay, ciyaarta Europa League ee ay maanta wajahayaan Bordeaux.
Aqriso kulamada Koobka Uefa Europa League ee Caawa iyo Saacadda la ciyaarayo
0 Thursday November 26, 2015 - 10:25:00
(Kubadbile)-Waxaan Caawa laguwada in Qaradda Yurub ay ka dhacaan kulamadii 5-aad ee koobkja Uefa Europa League oo ah koobka Labaad ee Yurub.
Coutinho oo waayi doona kulanka Bordeaux
0 Tuesday November 24, 2015 - 16:52:19
Laacibka dalka Brazil ayaa la beddelay kulankii Manchester City oo laga shakisanyahay in uu dhaawac soo gaaray.
Klopp oo wacad ku maray inuu sii wadayo guulaha uu Yurub kaga soo hoynayo Reds
0 Saturday November 07, 2015 - 14:41:57
(Kubadbile) Jurgen Klopp maareeyaha kooxda Liverpool ayaa wacad ku maray in kooxdiisa Liverpool ay sii wadi doonto guulaha ay ka gaarayaan tartamada Yurub.
Dhammaan Natiijooyinka Europa League ee xalay
0 Friday November 06, 2015 - 13:47:55
Kulamo ka tirsan Koobka Europa League ayaa laga ciyaaray Garoomada kala duwan ee Qaaradda Yurub, kooxo ay Liverpool ka mid tahay waa ay badiyeen.